ပင်မစာမျက်နှာ ထုတ်ကုန်များ Organic Unfined Hemp Seed ဆီ
30 ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအပေါ် အခြေခံ. ထင္ျမင္ခ်က္ေရးထားခဲ့ပါ။
ငါဒီ Hemp Oil Daily ကိုသုံးနေတာနှစ်နှစ်ရှိပြီ။ ငါကတိတည်တယ် !! ငါညတိုင်းဇွန်းတစ်ဇွန်းကိုယူ (ပုလင်းထဲကစာလုံးရယ်) ၎င်းသည်အပျော့စားလောင်ကျွမ်းခြင်းမှအဆစ်နာရောဂါအထိနာကျင်စေသောအရာများစွာကိုကူညီသည်။ ၎င်းသည် OMEGAS မှစတင်သောကောင်းသောအရာများစွာနှင့်လည်းပြည့်စုံသည်။ မကြာသေးမီကငါ့ဒူးတွေအဲဒါကိုခံစားခဲ့ရတယ်၊ ငါနည်းနည်းလေးယူလိုက်ပြီးပွတ်လိုက်၊ နာကျင်မှုကပျောက်သွားတယ်။ ၎င်းသည် BP အတွက်အထောက်အကူပြုသည်ကိုလည်းကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါသည်။ ၎င်းသည်သဘာဝကုထုံးနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများပါ ၀ င်သောအံ့ဖွယ်အဆီတစ်ခုဖြစ်သည်။
ငါ Keri နဲ့ HMH (Texas၊ Holland မှာနေခဲ့စဉ်) ငါမတွေ့ခင်နှစ်အတော်ကြာကတည်းကငါ့ညာဘက်တင်ပါးမှာနာခဲ့ဖူးတယ်။ Keri သည်သူမ၏စတိုးဆိုင်၌ Master Gardener နံနက်စာစားပွဲကိုလက်ခံကျင်းပခဲ့ပြီးသူတို့၏မယုံနိုင်စရာပုံပြင်ကိုပြောပြခဲ့ပြီးလျှော်စေ့အဆီ (နှင့်လျှော်ကိုသုံးသောသူတို့၏အခြားထုတ်ကုန်များ) ၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုကျွန်ုပ်တို့အားပညာပေးခဲ့သည်။ ငါအဆီဖြည့်ထားတဲ့ rollerball သေးသေးလေးတစ်လုံး ၀ ယ်လိုက်တယ်၊ ငါ့နာတာရှည်တင်ပါးနာခြင်းကနေသက်ရောက်မှုမခံစားရခင်ဘယ်လောက်ကြာမယ်ဆိုတာကိုမေးဖို့သတိရပါ။ သူမငါ့ကိုမိနစ် ၂၀ လောက်အကြာကြီးပြောခဲ့တယ်။ အိမ်ပြန်ဖို့ငါ့ကားပေါ်ရောက်တာနဲ့အဲဒါကိုငါ့တင်ပါးမှာလိမ်းလိုက်တယ်။ ငါချက်ချင်းသက်သာရာရတယ်လို့ခံစားခဲ့ရတယ်၊ ဒါပေမယ့်မယုံနိုင်လောက်အောင်ဘဲ၊ ငါဆက်ပြီးသုံးခဲ့သလို၊ နောက်ဆုံးမှာငါ့မနက်ဖျော်ရည်ထဲကိုဇွန်းနှစ်ဇွန်းထည့်လိုက်တာကပိုသက်သာလာတယ်။ ဒီနေ့ငါလုံးဝနာကျင်မှုကင်းတယ်။ ငါကအဲဒါက ၁၀၀% အားလုံးသဘာဝပဲ။ ဘုရားသခင်သည်လျှော်၏ဖန်ဆင်းခြင်းသည်သင်၏ကျန်းမာရေးကိုကုစားနိုင်ပြီးပြန်လည်ထူထောင်နိုင်သည်၊ ၎င်းသည်သဘာဝ (အတုခိုးရန်ကြိုးစားလေ့ရှိသော) ဓာတ်ခွဲခန်းတစ်ခုတွင်ဖန်တီးထားသောဆေးဝါးများထက်သာလွန်ကြောင်းကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တွင်ပြင်းထန်သောထိတ်လန့်တုန်လှုပ်နေသောအဆစ်အမြစ်ရောင်ရမ်းခြင်းရှိသည်၊ နာကျင်မှုနှင့်ရောင်ရမ်းခြင်းအတွက်ဆေးခြောက်ကိုဆေးလိပ်ဖြတ်သည်။ ဤဆီကို ၅ မိနစ်အတွင်းတွင်အသုံးပြုပြီးနောက်ငါလက်၌ခြားနားချက်ကိုခံစားနိုင်ခဲ့သည်၊ နာရီအနည်းငယ်ကြာသည်
ကျွန်ုပ်ကုမ္ပဏီမှငါ့အသိုင်းအဝိုင်းမှပြောင်းရွှေ့လာချိန် မှစ၍ အွန်လိုင်းတွင်ပထမဆုံးအကြိမ်မှာယူခြင်း။ အမိန့်ကောင်းသောအခြေအနေနှင့်လျင်မြန်စွာလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ဒီထုတ်ကုန်ကကျွန်မရဲ့အဆစ်နာကျင်ခြင်းနှင့်တောင့်တင်းခြင်းနှင့်ငါ့ကိုကူညီပေးသည်။ အလွန်ကြီးစွာသောထုတ်ကုန်ပေးသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
Shelley Fuller ဖြစ်သည်